Imisebenzi yezandla ngephepha le-crepe | Imisebenzi yezandla ivuliwe
Iphepha lemveliso yobugcisa
Molweni nonke! Kwinqaku lanamhlanje siza kubona imisebenzi yobugcisa emithathu yokwenza ngephepha le-crepe. Le misebenzi yezandla ifanelekile ukwenza nabantwana nangaliphi na ixesha kwaye ke banokuhombisa indlu yethu.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zeziphi izinto zobugcisa esizicebisayo?
2 Inombolo yombono 1 yokwenza ngephepha le-crepe: Intyatyambo yeLotus
3 Inombolo yembono yesi-2 yokwenza ngephepha le-crepe: Iintyatyambo zeecherry
4 Inombolo yembono yesi-3 yokwenza ngephepha le-crepe: I-Ballerina
Iphepha le-Crepe, elaziwa ngokuba yi-tissue paper, i-crepe, i iphepha elilula kakhulu elinokuguquguquka okukhulu kuba ingasetyenziswa eyomileyo, emanzi ukuya kwiibhokisi zemigca okanye izinto ezithile. Ino-elasticity ethile kunye neentlobo ezininzi zemibala, eyenza ilungele ubugcisa. Kwakhona, kulula kakhulu ukuyifumana.
Inombolo yombono 1 yokwenza ngephepha le-crepe: Intyatyambo yeLotus
Iintyatyambo zeLotus zilula kakhulu ukwenza kwaye zingasetyenziselwa ukuhlobisa ezifana: ukwenza i-centerpieces, izipho, njl.
Ungayibona indlela yokwenza lo msebenzi wobugcisa inyathelo ngenyathelo ngokulandela ikhonkco elingezantsi: Intyatyambo yelotus yephepha elilula
Inombolo yembono yesi-2 yokwenza ngephepha le-crepe: Iintyatyambo zeecherry
Iintyatyambo zeCherry zifanelekile ukwenza i-bouquet kwaye uyinike abo sibathandayo njengeenkcukacha.
Ungayibona indlela yokwenza lo msebenzi wobugcisa inyathelo ngenyathelo ngokulandela ikhonkco elingezantsi: Iintyatyambo zeCherry, zilungele ukuhombisa indlu kwimozulu elungileyo
Inombolo yembono yesi-3 yokwenza ngephepha le-crepe: I-Ballerina
Iphepha leCrepe likwafanelekile ukwenza iimpahla zemisebenzi ethile yezandla, njengale tutu ye-ballerina.
Ungayibona indlela yokwenza lo msebenzi wobugcisa inyathelo ngenyathelo ngokulandela ikhonkco elingezantsi: I-Ballerina ngentonga yobugcisa
Kwaye ulungile! Ngoku ungaqala ukwenza ubugcisa ngale nto. Unokufumana ezinye iindlela ezininzi kwiwebhusayithi yethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla kunye nezixhobo » Iphepha lezandla » Iphepha lemveliso yobugcisa
Intliziyo okanye isidanga seentliziyo